စပါးစိုကျပေးရသော ဓညဝတီသားတို့ကို ဆနျပွုတျသာ စားစသေောအခါ . . . – Kyaw Zaw Oo's Blog
August 13, 2016 August 12, 2019 kyaw zaw oo
စပါးစိုကျပေးရသော ဓညဝတီသားတို့ကို ဆနျပွုတျသာ စားစသေောအခါ . . .
စပါးစိုက်ပေးရသော ဓညဝတီသားတို့ကို ဆန်ပြုတ်သာ စားစေသောအခါ . . .
၁။ ရခိုင့်သမိုင်းကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းငါးထောင်ကျော်က ဓညဝတီခေတ် ရခိုင့်နိုင်ငံတော်ကို ထူထောင်ခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယခု ပလက်ဝခရိုင် နှင့် ကျောက်တော်-မြောက်ဦးလွင်ပြင်တို့ကို စိုးမိုးသော မြို့တော် “ဓညဝတီ” ဟူသော အမည် သည် ဆန်ရေစပါး ပေါများရာအရပ် ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
၂။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ခန့်က ဗိုလ်နေဝင်းဦးဆောင်သော တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အစိုးရခေတ်တွင် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကို အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရက မနိုင်မနင်း ကိုင်တွယ်မှုများ ရှိသည့်အပြင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ တကိုယ်ရည် အလွဲသုံးစား အသုံးစရိတ်များ ကြီးကြီးမားမား ရှိနေရာ ထိုအတွက် ဖြည့်သွင်းပေးရမည့် လိုအပ်ငွေ များကို ဆန်စပါးတွန်းထိုးတင်ပို့ကာ ငွေရှာခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားသည်။ ပြည်တွင်း စားသုံးမှု လိုအပ်ချက်ကို ထည့်မစဉ်းစားပဲ ပြည်ပသို့ ဆန်တင်ပို့သည်။
၃။ ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေ ၁၉၆၇-ခုနှစ် သြဂုတ်လ အတွင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဆန်ရှားပါးမှု စတင်ခံစားရသည်။ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးသည့် ကျေးလက် တောရွာ များတွင် ဝမ်းစာစပါးသိုလှောင်ထားကြသည့်အပြင် ရပ်ရွာအလိုက် မရှိဆင်းရဲသားများ အား ဆန်မျှဝေပေးကြခြင်းအားဖြင့် ငတ်မွတ်သူမရှိအောင် ထိန်းထားနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မြို့ပြဖြစ်သည့် စစ်တွေမြို့ပေါ်တွင် ထိုကဲ့သို့ တောင်သူများလည်းမဟုတ် သည့်အတွက် ဝမ်းစာသိုလှောင်မှုလည်းမရှိ၊ ရွာငယ်များကဲ့သို့အပြန်အလှန် ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် နိုင်သည့် စနစ်မရှိသည့်အတွက် ထမင်းငတ်သည့် မိသားစုများရှိသည့် အခြေအနေကို စရောက်လာကြသည်။ ရခိုင်သူရခိုင်သားများထမင်းငတ်နေကြသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ရခိုင်သူရခိုင်သားတို့စိုက်ပျိုးရရှိသော ဆန်စပါးတို့အား သေနတ်အားကိုးဖြင့် အစိုးရကဝယ်စုဆောင်းထားကာ သင်္ဘောကြီးငယ်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ သည်။ စစ်တွေမြို့သူမြို့သားများ ငတ်ပြတ်နေချိန်တွင် ဆန်စပါးအား နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မည့် သင်္ဘောအချို့ စစ်တွေဆိပ်ကမ်းနေရာများတွင် ဆန်အပြည့်ဖြင့် ဆိုက်ကပ် လျက် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို ဆန်ကို သိုလှောင်ထားသည့် ဂိုထောင်များ၊ ဆန်တင် ထားသည့် သင်္ဘောများကိုတက်၍ ငတ်ပြတ်နေသူများက ဆန်လုမှုများ စတင်ဖြစ်ပွား သည်။ သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်တွင် ဆန်လုယူမှုများ စဖြစ်သည်။ (သို့သော် ပစ်သတ်မှု ဖြစ်သည်မှာ ဆန်လုသူများကို ပစ်သတ်ခြင်းမဟုတ်၊ နောက်တစ်နေ့ ဆန္ဒပြသူများကို ပစ်သတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။)
၅။ မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာ လှုပ်လာသည့်အခြေအနေများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် အာဏာပိုင်များဘက်က ရခိုင်အရာရှိများနှင့် စစ်တွေမြို့ခံလူကြီးများ စကားပြောဆိုမှု များ ရှိခဲ့သည် ဟု ကြားသိမှတ်သားရဖူးသည်။ မှတ်သားဖွယ်ရာတစ်ခုက – ရခိုင်များ ဆန်မရှိလျှင် မုန့်တီစားကြပါ ဟူ၍ အမြော်အမြင်ကင်းစွာ ပေးသော အကြံစကား တစ်ခွန်းကို တစုံတစ်ယောက်က ပြောခဲ့သည် ဟူသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားကို မြို့သူမြို့သားများ တဆင့်စကား တဆင့်နားဖြင့် ကြားသိကြသည်။
၆။ သြဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့လုံးကျွတ်နီးပါး လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွား သည်။ ကြွေးကြော်သံများအနက် “ဆန်ပြုတ်မစား ရခိုင်သား” ဟူသည့် ကြွေးကြော်သံ လည်းပါဝင်သည်။ လူတန်းကြီးက မိုင်နီးပါးရှည်နိုင်သည် ဟု ဆိုကြသည်။ ကုန်သည်လမ်း မြဆန်စက်ရှေ့တွင် စစ်တပ်၏ ပိတ်ဆို့မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုနေရာတွင် ပစ်သတ်မှု ဖြစ်ပွားသည်။ ခန့်မှန်းခြေ လူနှစ်ရာခန့်သေသည်။ သေသူရော မသေမရှင်ဖြစ်နေသူ များကိုပါ ကားကြီးများပေါ် ဆွဲတင်ယူဆောင်သွားသည်။ စစ်အာဏာပိုင်များက အလောင်းများ ကို ညတွင်းချင်း မြှုပ်နှံဖျောက်ဖျက်ခဲ့သည်။
၇။ လူဦးရေ သိန်းသန်းချီကာသေခဲ့သည့် ၁၈၄၅ နှင့် ၁၈၅၂ အကြားတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အိုင်းရစ် ငတ်မွတ်မှုကြီးလောက် မကြီးကျယ်သော်လည်း နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားစရာအချက် အချို့ရှိသည်။ တစ်အချက်၊ ငတ်မွတ်မှုသည် စားရေရိက္ခာ မထုတ်လုပ်နိုင်သောကြောင့် မဟုတ်။ နှစ်အချက်၊ အုပ်ချုပ်သူများက ငတ်သေကြတော့မည့် အုပ်ချုပ်ခံများကို ငါတို့လူမျိုးမဟုတ် ဟု သဘောထားသည်၊ သူတို့သည် ကိုလိုနီနယ်သားများသာ ဖြစ် သည် ဟု သဘောထားသည်။
၈။ ရခိုင်တို့၏ကံကြမ္မာကို ရခိုင်တို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပိုင်ခွင့် ရလာမှသာ ထိုအဖြစ်မျိုး နောင်တွင် မကြုံရလေအောင် ကြိုတင်တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၉။ ရခိုင်သည် ကိုလိုနီနယ်မဟုတ် ဆိုပြီး ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်အနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ထားရှိဖို့ လိုအပ်သည်။ မိမိတို့ပြည်နယ်က မိမိတို့က ရွေးကောက် တင်မြှောက်သူများက မိမိတို့ကိုယ်စား အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်၊ မိမိတို့ ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသော သဘာဝ သယံဇာတများကို မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်-စီမံ-အကျိုးခံစားခွင့် နဲ့ မိမိတို့အရေးအရာကို မိမိစီမံခန့်ခွဲခွင့် တို့ ရှိနေပါမှ မိမိတို့သည် ကိုလိုနီနယ်မဟုတ်သည့်အခြေအနေကို ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက မိမိတို့သည် ကိုလိုနီနယ် သားများအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခံနေရကြောင်း သုံးသပ်နိုင်သည်။
၁၀။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်နိုင်သရွေ့ ရခိုင်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းနိုင်ခွင့် ရနိုင်မည် မဟုတ်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက မစို့မပို့ဟပေးထားသော ခွေးတိုးပေါက် နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများ သက်သက်အားဖြင့်လည်း ရခိုင့်ကံကြမ္မာကို ရခိုင်ဖန်တီးပိုင်ခွင့် ရနိုင်ဖို့မလွယ်။ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
(ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းက စစ်တွေမြို့နယ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရုံး၌ ကျင်းပခဲ့သော ၄၉-နှစ်မြောက် ရခိုင်ဆနာပြဿနာနေ ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားတွင် အထက်ပါ အချက်များကို အခြေခံလျက် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။)
၁၃ သြဂုတ် ၂၀၁၆
[ Unicode version here]
၁။ ရခိုငျ့သမိုငျးကို လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျးငါးထောငျကြျောက ဓညဝတီခတျေ ရခိုငျ့နိုငျငံတျောကို ထူထောငျခွငျးဖွငျ့ စတငျခဲ့ပါသညျ။ ယခု ပလကျဝခရိုငျ နှငျ့ ကြောကျတျော-မွောကျဦးလှငျပွငျတို့ကို စိုးမိုးသော မွို့တျော “ဓညဝတီ” ဟူသော အမညျ သညျ ဆနျရစေပါး ပေါမြားရာအရပျ ဟု အဓိပ်ပါယျရပါသညျ။
၂။ လှနျခဲ့သောနှဈပေါငျးငါးဆယျခနျ့က ဗိုလျနဝေငျးဦးဆောငျသော တျောလှနျရေး ကောငျစီ အစိုးရခတျေတှငျ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာကို အာဏာသိမျး စဈအစိုးရက မနိုငျမနငျး ကိုငျတှယျမှုမြား ရှိသညျ့အပွငျ ဗိုလျနဝေငျး၏ တကိုယျရညျ အလှဲသုံးစား အသုံးစရိတျမြား ကွီးကွီးမားမား ရှိနရော ထိုအတှကျ ဖွညျ့သှငျးပေးရမညျ့ လိုအပျငှေ မြားကို ဆနျစပါးတှနျးထိုးတငျပို့ကာ ငှရှောခွငျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးရနျ ကွိုးစားသညျ။ ပွညျတှငျး စားသုံးမှု လိုအပျခကျြကို ထညျ့မစဉျးစားပဲ ပွညျပသို့ ဆနျတငျပို့သညျ။
၃။ ထိုကဲ့သို့သော အခွအေနေ ၁၉၆၇-ခုနှဈ သွဂုတျလ အတှငျးတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ အတှငျး ဆနျရှားပါးမှု စတငျခံစားရသညျ။ ဆနျစပါးစိုကျပြိုးသညျ့ ကြေးလကျ တောရှာ မြားတှငျ ဝမျးစာစပါးသိုလှောငျထားကွသညျ့အပွငျ ရပျရှာအလိုကျ မရှိဆငျးရဲသားမြား အား ဆနျမြှဝပေေးကွခွငျးအားဖွငျ့ ငတျမှတျသူမရှိအောငျ ထိနျးထားနိုငျသညျ။ သို့ရာတှငျ မွို့ပွဖွဈသညျ့ စဈတှမွေို့ပျေါတှငျ ထိုကဲ့သို့ တောငျသူမြားလညျးမဟုတျ သညျ့အတှကျ ဝမျးစာသိုလှောငျမှုလညျးမရှိ၊ ရှာငယျမြားကဲ့သို့အပွနျအလှနျ ကြှေးမှေး စောငျ့ရှောကျ နိုငျသညျ့ စနဈမရှိသညျ့အတှကျ ထမငျးငတျသညျ့ မိသားစုမြားရှိသညျ့ အခွအေနကေို စရောကျလာကွသညျ။ ရခိုငျသူရခိုငျသားမြားထမငျးငတျနကွေသညျနှငျ့ တဈပွိုငျနကျတညျးမှာပငျ ရခိုငျသူရခိုငျသားတို့စိုကျပြိုးရရှိသော ဆနျစပါးတို့အား သနေတျအားကိုးဖွငျ့ အစိုးရကဝယျစုဆောငျးထားကာ သင်ျဘောကွီးငယျဖွငျ့ နိုငျငံခွားသို့ တငျပို့ သညျ။ စဈတှမွေို့သူမွို့သားမြား ငတျပွတျနခြေိနျတှငျ ဆနျစပါးအား နိုငျငံခွားသို့ တငျပို့မညျ့ သင်ျဘောအခြို့ စဈတှဆေိပျကမျးနရောမြားတှငျ ဆနျအပွညျ့ဖွငျ့ ဆိုကျကပျ လကျြ ရှိနဆေဲဖွဈသညျ။ ထို ဆနျကို သိုလှောငျထားသညျ့ ဂိုထောငျမြား၊ ဆနျတငျ ထားသညျ့ သင်ျဘောမြားကိုတကျ၍ ငတျပွတျနသေူမြားက ဆနျလုမှုမြား စတငျဖွဈပှား သညျ။ သွဂုတျလ (၁၂) ရကျတှငျ ဆနျလုယူမှုမြား စဖွဈသညျ။ (သို့သျော ပဈသတျမှု ဖွဈသညျမှာ ဆနျလုသူမြားကို ပဈသတျခွငျးမဟုတျ၊ နောကျတဈနေ့ ဆန်ဒပွသူမြားကို ပဈသတျခွငျး ဖွဈသညျ။)
၅။ မငွိမျမသကျဖွဈလာ လှုပျလာသညျ့အခွအေနမြေားကို ထိနျးသိမျးနိုငျရနျအတှကျ အာဏာပိုငျမြားဘကျက ရခိုငျအရာရှိမြားနှငျ့ စဈတှမွေို့ခံလူကွီးမြား စကားပွောဆိုမှု မြား ရှိခဲ့သညျ ဟု ကွားသိမှတျသားရဖူးသညျ။ မှတျသားဖှယျရာတဈခုက – ရခိုငျမြား ဆနျမရှိလြှငျ မုနျ့တီစားကွပါ ဟူ၍ အမွျောအမွငျကငျးစှာ ပေးသော အကွံစကား တဈခှနျးကို တစုံတဈယောကျက ပွောခဲ့သညျ ဟူသညျ့အခကျြဖွဈသညျ။ ထိုစကားကို မွို့သူမွို့သားမြား တဆငျ့စကား တဆငျ့နားဖွငျ့ ကွားသိကွသညျ။
၆။ သွဂုတျလ (၁၃) ရကျနတှေ့ငျ စဈတှမွေို့လုံးကြှတျနီးပါး လမျးပျေါဆန်ဒပွမှုဖွဈပှား သညျ။ ကွှေးကွျောသံမြားအနကျ “ဆနျပွုတျမစား ရခိုငျသား” ဟူသညျ့ ကွှေးကွျောသံ လညျးပါဝငျသညျ။ လူတနျးကွီးက မိုငျနီးပါးရှညျနိုငျသညျ ဟု ဆိုကွသညျ။ ကုနျသညျလမျး မွဆနျစကျရှတှေ့ငျ စဈတပျ၏ ပိတျဆို့မှုနှငျ့ ရငျဆိုငျရသညျ။ ထိုနရောတှငျ ပဈသတျမှု ဖွဈပှားသညျ။ ခနျ့မှနျးခွေ လူနှဈရာခနျ့သသေညျ။ သသေူရော မသမေရှငျဖွဈနသေူ မြားကိုပါ ကားကွီးမြားပျေါ ဆှဲတငျယူဆောငျသှားသညျ။ စဈအာဏာပိုငျမြားက အလောငျးမြား ကို ညတှငျးခငျြး မွှုပျနှံဖြောကျဖကျြခဲ့သညျ။
၇။ လူဦးရေ သိနျးသနျးခြီကာသခေဲ့သညျ့ ၁၈၄၅ နှငျ့ ၁၈၅၂ အကွားတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော အိုငျးရဈ ငတျမှတျမှုကွီးလောကျ မကွီးကယျြသျောလညျး နှိုငျးယှဉျစဉျးစားစရာအခကျြ အခြို့ရှိသညျ။ တဈအခကျြ၊ ငတျမှတျမှုသညျ စားရရေိက်ခာ မထုတျလုပျနိုငျသောကွောငျ့ မဟုတျ။ နှဈအခကျြ၊ အုပျခြုပျသူမြားက ငတျသကွေတော့မညျ့ အုပျခြုပျခံမြားကို ငါတို့လူမြိုးမဟုတျ ဟု သဘောထားသညျ၊ သူတို့သညျ ကိုလိုနီနယျသားမြားသာ ဖွဈ သညျ ဟု သဘောထားသညျ။
၈။ ရခိုငျတို့၏ကံကွမ်မာကို ရခိုငျတို့ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးပိုငျခှငျ့ ရလာမှသာ ထိုအဖွဈမြိုး နောငျတှငျ မကွုံရလအေောငျ ကွိုတငျတားဆီးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ။
၉။ ရခိုငျသညျ ကိုလိုနီနယျမဟုတျ ဆိုပွီး ရညျမှနျးခကျြတဈရပျအနနေဲ့ စိတျထဲမှာ ထားရှိဖို့ လိုအပျသညျ။ မိမိတို့ပွညျနယျက မိမိတို့က ရှေးကောကျ တငျမွှောကျသူမြားက မိမိတို့ကိုယျစား အုပျခြုပျပိုငျခှငျ့၊ မိမိတို့ ပွညျနယျမှ ထှကျရှိသော သဘာဝ သယံဇာတမြားကို မိမိတို့ ပိုငျဆိုငျ-စီမံ-အကြိုးခံစားခှငျ့ နဲ့ မိမိတို့အရေးအရာကို မိမိစီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ တို့ ရှိနပေါမှ မိမိတို့သညျ ကိုလိုနီနယျမဟုတျသညျ့အခွအေနကေို ရောကျလာပွီဖွဈကွောငျး သိရှိနိုငျသညျ။ ထိုသို့မဟုတျပါက မိမိတို့သညျ ကိုလိုနီနယျ သားမြားအဖွဈ အုပျခြုပျခံနရေကွောငျး သုံးသပျနိုငျသညျ။
၁၀။ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံကို မပွငျနိုငျသရှေ့ ရခိုငျတို့သညျ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးနိုငျခှငျ့ ရနိုငျမညျ မဟုတျ။ ထို့အပွငျ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံက မစို့မပို့ဟပေးထားသော ခှေးတိုးပေါကျ နိုငျငံရေးနညျးလမျးမြား သကျသကျအားဖွငျ့လညျး ရခိုငျ့ကံကွမ်မာကို ရခိုငျဖနျတီးပိုငျခှငျ့ ရနိုငျဖို့မလှယျ။ နညျးလမျး ပေါငျးစုံဖွငျ့ ကွိုးစားခြဲ့ထှငျနိုငျဖို့ လိုအပျပါသညျ။
(ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးက စဈတှမွေို့နယျ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီရုံး၌ ကငျြးပခဲ့သော ၄၉-နှဈမွောကျ ရခိုငျဆနာပွဿနာနေ ဝမျးနညျးအောကျမဖှေ့ယျ အခမျးအနားတှငျ အထကျပါ အခကျြမြားကို အခွခေံလကျြ ဟောပွောခဲ့ပါသညျ။)
၁၃ သွဂုတျ ၂၀၁၆
Previous Video | Talk on 1982 Myanmar Citizenship Law by U Kyaw Zaw Oo
Next ဥပဒဖေောကျဖကျြနသေူတှကေ နိုငျငံသားစိစဈရေးကို ဥပဒမေဲ့ လုပျနကွေသလား